Beddit, iyo yekurara yekutarisa yawanga uchitsvaga | IPhone nhau
Kuongorora kurara kwave chimwe cheanonyanya kupisa maturusi ezvehutano munguva dzichangopfuura. Zvidzidzo zveSainzi zvinotsigira kuti kurara kwakanaka kwakakosha kuve nekuita kwakanaka masikati, pamusoro pekubatsira kusimudzira hutano hwedu. Uye mukati meiyi fashoni, zvipfeko, izvo zvishandiso izvo zvatinogara tichipfeka, zvave chinhu chakakosha cheichi. Kune akawanda maficha anobatsira kuongorora kurara kwedu, kana izvo zvirinani kuvimbisa izvo, asi kukwana kwezvidiki zvidimbu izvo zvatinopfeka pachiuno chedu zvinodzivirira izvo zviyero zvakagadzirwa kuti zvive zvinonyatso shanda muzviitiko zvakawanda. Beddit, zvisinei, inovimbisa kuzadzikisa izvi nekuda kwekuti sensor yayo haisi mune chero inopfekwa, asi iwe wakaiisa pamubhedha, asi zvakare inoshandisa ma sensors eApple Watch yedu kuwedzera ruzivo.
Beddit ine kunyorera kwe iPhone uye Apple Watch, iyo yekupedzisira yakashandurwa kuWOSOS 2 saka kuve yemuno ine mukana wekuwana sensors dzewachi yedu. Korona inogona kushandiswa kupururudza kuburikidza nemamenyu ekushandisa, uye inogona kuwana dhata inounganidzwa nemoyo wekurovera uye sensors anofamba Asi maitiro ekuwana zviyero zvakavimbika kana wachi ichifanirwa kubhadhariswa husiku? Nekuda kwekuti iyo huru sensor yeBeddit iri pazasi pedu chete patinorara, pasi pezvivharo.
Wachi yedu inoongorora zvatinoita zuva nezuva, kuunganidza dhata patinotora kumborara mushure mekudya, uye chinja iyo data kuhutano Hutano, iyo iyo Beddit inoenderana zvizere. Husiku tinogona kusiya Apple Watch ichiona kuti sensor iri pasi pemashiti ichaita iro rese basa. Beddit yakatotengeswa mairi chitoro chepamutemo ye € 149 uye mashandisiro ayo anowanikwa kuApple neApple Tarisa zvachose mahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Beddit, iyo yekurara yekutarisa yawanga uchitsvaga
Premium One W3, imwe base yezvinhu zvako zvese